बोनम्यारो क्यान्सर पीडित करिश्मा पुनलाई उपचार गर्न आर्थिक समस्या, सहयोगको अपिल (दर्दनाक भिडियो रिपोर्ट) - Sansar Dainik
बोनम्यारो क्यान्सर पीडित करिश्मा पुनलाई उपचार गर्न आर्थिक समस्या, सहयोगको अपिल (दर्दनाक भिडियो रिपोर्ट)
August 23, 2020 adminLeaveaComment on बोनम्यारो क्यान्सर पीडित करिश्मा पुनलाई उपचार गर्न आर्थिक समस्या, सहयोगको अपिल (दर्दनाक भिडियो रिपोर्ट)
ताजा संवाददाता । काठमाडौं , ७ भदौ । रुकुम पुर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १२ कि क्यान्सरपीडित करिश्मा पुनमगरको आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न समस्या भएको छ । सामान्यतया गाउँमा खेति किसानी गरेर गुजारा गर्ने पुन परिवारमा गरिबीको कारणले उपचार गर्न समस्या भएको हो ।
उपचारका लागी सहयोग जुट्दै
आर्थिक अभावका कारण रोग पालेर बस्न बाध्य भएकि उनको सहयोगमा स्वदेश तथा बिदेशमा रोजगारी गर्ने युवाहरु आर्थिक सहयोग संकलनमा जुटेका छन् । गरिबीका कारण उपचारमा समस्या देखिएको पुनको उपचारका लागी सहयोग जुटेको छ । आर्थिक अभावमा क्यान्सर संग लडिरहेकि करिश्मा पुनलाई स्वदेश तथा बिदेश बाट सहयोग प्राप्त भएको हो ।
सहयोग को लागि सम्पर्क : 01-4034291
अचम्म,ले, सस्ति,यो, काठमाडौं,मा जग्गा, सामा,न्य, व्यक्ति,ले, पनि, कि,न्न, सकिने,
साउदीका राजाले भने-कामदारको तलब रोक्नेलाई सरकारी भुक्तानी नदेऊ!! पीडित कामदारलाई तलब नदिने कम्पनीविरुद्ध मुद्धा चलाउन र स्वदेश फर्किन चाहने कामदारलाई फर्काउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ!!
सुशान्तलाई अन्तिम बिदाई गर्न पुगिन् प्रेमिका ( भिडियो हेर्नुहोस् )
हंगकंग थर्काइन् ज्योतिले ( भिडियो सहित )